March | 2011 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
ကံဆိုသည်မှာ .. ..
ကံဆိုသည်မှာ .. .. စာရေးသူသည် ကံ အကြောင်းကို အနည်းငယ် တင်ပြလိုသည် .. .. စာရေးသူသည် “ကံကို မယုံကြသူများ –” ဆောင်းပါးကို ဖတ်မိရာ – (စာရေးဆရာမ အမည်ကို မဖော်ပြတော့ပါ) “ကံကိုယုံပြီးစောင့်မနေဘူး၊ ကြိုးစားမယ် ဒီဘ၀မှာ .. ..” စသည်ဖြင့် — ဖော်ပြထားလေသည်။ စာရေးသူအနေနှင့်မူ – ကံဆိုတာကို နားလည်အောင် ကြိုးစားသင့်သည်ဟု သဘောရသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ “မင်းတို့ ကံကိုယုံတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘာမှမလုပ်နဲ့ ပျင်းနေကြ အိပ်နေကြ၊ … Continue reading →
Posted on March 24, 2011 by chitnge
ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ ထိုးနှက်ချက်များ ဤလောကတွင် ဘုရားမရှိ တရားမရှိ ကွန်မြူနစ်များသည် လူသား မျိုးပြုတ်အောင် ဖျက်ဆီးနေကြသော သက်ရှိများဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို နလံမထူအောင် ထိုးနှက်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာလိုက်စားလျှင် လူရာမ၀င်ရ၊ ခေါင်းမဖော်ရ၊ ခေါင်းငုံ့ခံရမည်၊ သူများ နှိပ်စက်သမျှ ခံရမည်ဟု ၀ါဒဖြန့်ကြသည်။ အချို့သော ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် အတွေးအခေါ် တိမ်သဖြင့် ကွန်မြူနစ်များ၏ ထိုးနှက်ချက်များကို ယုံကြည်ကာ သူတို့ကပင် ထပ်မံ၍ ၀ါဒဖြန့်ပြန်သည်။ တရားသမားသည် မည်သူ့ကိုမှ ဘာမှမလုပ်ရ ခေါင်းငုံ့ခံရမည် အသေခံနိုင်လျှင် ပိုကောင်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ Tags: Communists, … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Communists, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်	| 1 Comment
မြတ်စွာဘုရားအလိုတော်ကျ – ၏သစ္စာဝါဒီများ .. .. ကျွန်တော်က အနှစ်(၄၀) ကျင့်ခဲ့တော့ နောက် ဆရာကောင်းနဲ့လည်း ဖူးတွေ့ခဲ့ရတော့ သိတာတွေသိတယ်လို့ ၀န်ခံဖူးတယ်။ သိတာတွေတော့ ရှိတာပေ့ါ ဒါပေမယ့် ခက်တာက မသိတဲ့သူတွေကို ပြောဖို့ဆိုတာ တော်တော်ခက်တယ်။ သူတို့ဟာ အခြေခံကိုက အကုသိုလ်တွေနဲ့ နှလုံးသွင်းလာကြတာ။ ဒီတော့ အကုသိုလ် ဓာတ်ခံနဲ့ဆိုတော့ ကိုယ်က သိတာတွေ ပြောပြပေမယ့်လည်း သူတို့ နားပေါက်ဖို့တော့ မလွယ်ဘူး။ တကယ်တမ်းကျတော့ လောကမှာ မှန်တာကန်တာ ပြောသင့် ပြောထိုက်တာပဲ ပြောသင့်တာပေါ့၊ Tags: … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Myanmar Posts, Vipassana, ဆရာကောင်း, သာသနာ	| Leaveacomment
ရိုက်သွင်းသည် နှင့် ကူးစက်သည်ဆိုရာဝယ် –
ရိုက်သွင်းသည်နှင့်ကူးစက်သည်ဆိုရာဝယ် – ဗုဒ္ဓဘာသာများသည် သဘာဝအားဖြင့် ရိုးသားကြသည်၊ မြန်မာများသည်လည်း ထိုနည်းတူ ရိုးသားကြသည်။ အခါအားလျော်စွာ အသိပညာ လောကီ အနည်းငယ်တတ်သော မတတ်တတတ် ပုဂ္ဂိုလ်များက ရိုက်သွင်းသော သဘောထားများကို ရိုးသားသော မြန်မာများသည် အဟုတ်မှတ်၍ စွဲယူတတ်သည်။ ဥပမာ ဆိုပါစို့ — ကွန်မြူနစ်များသည် ဘုရား တရား မလိုက်စားအောင်၊ ဘုရား တရားကို မကိုးကွယ်အောင် – ဘုရား တရားလိုက်စားသူသည် အရာရာကို ငုံ့ခံရမည်ဟူ၍ ရိုက်သွင်းပေးလိုက်သည်။ ထိုအခါ မြန်မာတို့သည် ဟုတ်နိုးယောင်ယောင်နှင့် တရားလိုက်သောသူသည် … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Communists, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်	| Leaveacomment
အသစ်ထွက်ရှိသော စာအုပ်မျက်နှာဖုံးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Mar 22, 2011 နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ စာအုပ်ကြော်ငြာ။ Admin. No tags for this post.
ဓမ္မဓိဌာန်ကျသောအဆုံးအဖြတ်ဟူသည် ယောဂီများ .. .. သူတော်ကောင်းကြီးတွေအကြောင်း ဆက်ကြအုံးစို့ .. .. စာရေးသူ ဘ၀နဲ့ချီပြီး တက္ကသိုလ်မှာ ဘ၀နဲ့ချီပြီး ဓမ္မဓိဌာန်ကျတဲ့ အမြော်အမြင်ကို လေ့လာခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိ ကိုယ်တိုင်ကတော့ မတွေ့ခဲ့ဘူး။ ပုဂ္ဂလိက ဆန္ဒစွဲတွေနဲ့ ရောယှက်နေတဲ့ အမြင်တွေကိုတော့ သွန်သင်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဓမ္မဓိဌာန်ကျတဲ့ အမြင်ကို ပီပီပြင်ပြင် မတွေ့ခဲ့ရဘူး။ တက္ကသိုလ်က ထွက်လာပြီး ရဟန္တာကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတွေကို ဖူးတွေ့ပြီး အဆိုအဆုံးအမ ခံယူတော့မှ ဓမ္မဓိဌာန်ကျတဲ့ အဆိုအဆုံးမတွေ၊ ဓမ္မဓိဌာန်ကျတဲ့ အဆုံးဖြတ်တွေကို နာကြားခွင့်ရတယ် … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, လုပ်ကြံဖန်တီးမှု, သည်းခံတယ်ဆိုတာ	| Leaveacomment